साहित्यकारहरुको साझा पीडा – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
साहित्यकारहरुको साझा पीडा
मानवीय स्वभाव र रूचिअनुसार मान्छेका फरक–फरक प्रतिभा हुन्छन् । कोही कविता लेखेर आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्छन् । कोही निबन्धमा डुबेर आफ्नो पीडा ओकल्छन् । कोही महिनौँ गीत लेखेर चर्चामा आउँछन् । जुनसुकै विधामा जे लेखे पनि पहिला त आफ्नो आत्मसन्तुष्टिकै लागि लेखिन्छ । अरुका लागि मन परे पनि, नपरे पनि स्रष्टाहरुले लामो अनुभव, मेहनत र दुःखका साथ साहित्य सिर्जना गरेका हुन्छन् । तर, नेपालमा अझै पनि स्रष्टाका सिर्जनाहरुले उचित मूल्य पाउन सकेको छैन । अर्थात्, साहित्य सिर्जना गरेर सर्जकहरुको जीवनवृत्तिमा खासै प्रगति हुन सकेको देखिँदैन । लेखक तथा साहित्यकारले आफ्नो कृति सर्वप्रथम त रहरकै लागि सिर्जना गरेका हुन्छन् । कसैले चर्चा पाउन कृति निकाल्छन्् त कतिले संख्यात्मक कीर्तिमान कायम गर्न पुस्तक छपाउँछन् ।
लेखकहरुका नयाँ कृति दिनहुँ बजारमा आउँछन् । अहिलेका सिर्जनाहरु व्यक्तित्व हेरेर वा प्रोफाइलका आधारमा बिक्री हुने गरेका छन् । लेख्न गाह्रो काम भएकै कारण साहित्यकारहरु भन्ने गर्दछन्– ‘साहित्य रचना गर्नु र त्यसलाई पुस्तकारका रुपमा प्रकाशन गर्नु महिलाहरुले प्रसव पीडा भोग्नुजस्तै हुन्छ ।’ स्तरीय र पठनीय रचनाहरु बिरलै पुस्तकका रुपमा आउँछन् । अधिकांश स्रष्टाले प्रकाशन गर्ने रहरैरहरमा आफ्ना सिर्जनाहरु पाण्डुलिपिमा सीमित गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । लेखक तथा साहित्यकार राष्ट्रका अमूल्य सम्पत्ति हुन्, तथापि राज्यले स्रष्टाहरुको सम्मान गर्न सकेको छैन । कति कृतिहरु साँच्चै नै राम्रा हुन्छन् । प्रचार–प्रसार र पहुँचबिना त्यस्ता कृतिको त्यति चर्चा पनि हुँदैन र समीक्षकले समीक्षा गर्ने आवश्यकता पनि देख्दैनन् ।
मोफसलका साहित्यिक कृतिहरु जतिसुकै स्तरीय र पठनीय भए पनि त्यसले उचित सम्मान पाउन सकेको देखिँदैन । राष्ट्रिय ‘प्रोफाइल’ बनाएका स्रष्टाबाहेक अरु साहित्यकारहरुले साहित्यमा जति त्याग गरे पनि त्यसको कदर हुन सकेको छैन । लेखेर बाँच्न सक्ने अवस्था नआएसम्म न साहित्यिक रचनाले मूल्य पाउँछ, न त साहित्यकारको जीवनवृत्तिमा कुनै फरक नै आउँछ । अवस्था जे भए पनि आफूले सिर्जना गरेको कृति आफैँमा मूल्यवान् हुन्छ, मह¤वपूर्ण हुन्छ र ऐतिहासिक पनि हुन्छ । वास्तवमै दुःख गरेर साहित्य सिर्जना गर्नेभन्दा पनि यहाँ नक्कली स्रष्टाहरुले सक्कलीहरुलाई चुनौती दिने विडम्बना पनि उत्तिकै छ ।
साहित्यमा माफियातन्त्र हाबी भएको कुरा सबै स्रष्टाहरुलाई थाहा पनि छ । तर, त्यसको भण्डाफोर गर्न ढिलाइ भएकोमा म चकित भएको छु । केही महिनाअघिको कुरा हो, एक जनाले फेसबुकमा आउने गजल संकलन गरेर आफ्नो नाउँमा गजलसंग्रह नै निकालेछन् । गजलसंग्रहलाई गजलका अनुरागीहरुले औधी मन पनि पराएछन् । केही गजल त रेकर्ड नै गरेर रेडियोबाट गुञ्जिन थालेछ । गजलकारको पनि खुसीको सीमा नै रहेन । ती नक्कली स्रष्टा साहित्यिक कार्यक्रमहरुमा छाउनुसम्म छाए । मोतीजयन्तीदेखि भानुजयन्तीसम्म, देवकोटादेखि सम र भूपिदेखि नारायणगोपाल स्मृति दिवससम्म एकाएक गजल गाएर खुबै चर्चा बटुल्न सफल भए ।
नवसर्जकको यति धेरै चर्चा भएपछि र गजल सम्राट्कै उपाधि पाउन थालेपछि अन्य गजलकारहरुलाई पनि ईष्र्या लाग्नु स्वाभाविकै हो । वरिष्ठ गजलकारहरुले गजलको मर्मान्वेषण गर्न थालेपछि ती गजलकार एकाएक अभियुक्त ठहरिए । त्यत्रो कृति निकालेर देशविदेशबाट वाहवाही पाएका गजलमणि त माफियामणिमा दर्ज भए । त्यसपछि भूमिका लेखिदिने महान् गजलाधीशसमेत सर्वत्र आलोचित भए । यस्तो घटना घटेपछि अहिलेचाहिँ तँछाडमछाड गरेर फेसबुकमा रचना पोस्ट गर्ने कार्य घटेको छ । महान् साहित्यकारले समेत आफ्ना रचना चोरिने डरले हुन सक्छ, अहिले अलि बढी चनाखो हुन थालेका छन् ।
लेखरचना चोरिने र दुरूपयोग हुने घटना यो नयाँ होइन । उन्नाइसौँ सताब्दीदेखि नै अरुका रचना किर्ते गर्ने र आफ्नो नाममा छापेर चर्चा पाउने रोग अहिलेसम्म पनि यथावतै छ । देवकोटा, भूपिलगायत स्रष्टाका पाण्डुलिपि हराएको, सिर्जना चोरिएको र अभावले बेचिएका दृष्टान्त हामीले सुन्दै आएका हौँ । कति गीतकार तथा गायकले आफ्ना गीत तथा लयसमेत अर्कैका नाउँमा गाइएको गुनासा धेरै अघिदेखि सुनिँदै आइएकै हो । कुनै पुस्तक या जर्नलमा छापिएका लेखरचना दुरूस्तै अर्को पुस्तक, स्मारिका या विशेषांकमा छापिएका दृष्टान्तहरु कति छन् कति ! यसमा कसले खोजखबर गर्ने, कसले चासो राख्ने ? तर, अन्याय कसैलाई पनि नहुनु पर्ने हो । भइरहेछ.., भइरहने छ..।
एक पटक मैले महिनौँ लगाएर लेखेको ‘अनौठो सम्बन्ध’ शीर्षकको एउटा कथाको निर्मम ढंगले किर्ते भएछ । चितवनकै मासिक पत्रिका सम्बन्धमा छापिएको मेरो लामो कथा एक मित्रले विदेशबाट प्रकाशित हुने पत्रिकामा आफ्नो नाम र फोटोसमेत राखेर प्रकाशित गरेछन् । त्यो कथा चर्चित भएपछि उनलाई बधाईको ओइरो पनि आएछ र कथाकारका रुपमा लोकप्रिय भएछन् । उनैले मलाई पढ्न दिएको पत्रिकामा मेरो आफ्नै कथा उनको नाममा हुबहु छापिएको थियो । प्रतिक्रियामा ती मित्रले भने– ‘दिन त त्यो कथा तपाईंकै नाममा दिएको हुँ, मेरो नाममा छापिएर आएछ । यस्तै हो, कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदोरहेछ ।’ उनले यसलाई सामान्य नै ठाने । तर, आफूलाई यतिसम्म पीडा भयो कि आफैँलाई मन परेको ‘कथा’ माथि अतिक्रमण आफ्नै छिमेकी मित्रबाट भयो । यहाँ छापिएको त्यो पत्रिकाको कुनै पत्तो भएन । न कथाले चर्चा पायो, न त कथाकारले नै कुनै प्रतिक्रिया पायो । अचम्म त यो छ कि यो जमानामा सक्कलीभन्दा नक्कलीको नै बढी भाउ हुँदोरहेछ ।
यस्तै, एक पटक मेरो आफ्नै व्यङ्ग्य लेख ‘एसएमएस लभ’ पनि चोरी भयो । एक जना अनाम युवकले त्यो लेख पनि एउटा स्मारिकामा जस्ताको तस्तै ‘कपी–पेस्ट’ गरे । भाव उस्तै र सारवस्तु उस्तै भएका साहित्यिक लेखहरु त स्रष्टाहरुले लेख्छन्, लेख्तै आएका पनि छन् । तर, अरुका लेखरचना नक्कल गरेर आफ्नो नाउँमा छपाउँदा अलिकति स्वाभिमानको हेक्का राख्नुपर्ने होइन र ? के गर्नु, लाज पचाएपछि र हराएपछि कुनै कृति नै पुनर्मुद्रण गरेर नक्कल हुने हो कि भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छ । अझ मोफसलमा त झनै समस्या छ । कृति प्रकाशन गर्ने स्रष्टाहरु होसियार नहुने हो भने आफ्ना कृति अनाधिकृत रुपमा मुद्रण गरेर सडकमा बिक्रीवितरण पनि हुन सक्छ । सस्तो लोकप्रियता कमाउन फेसबुकमा साहित्यिक लेखरचना पेस्ट गर्नेहरु किर्तेहरुबाट बढी पीडित बन्ने गरेका छन् । अरुले दिनरात लगाएर गरेको सिर्जना चोरेर साहित्यकार बन्ने, अरुले लेखिदिएको कविता वाचन गरेर पुरस्कृत हुने र अरुले तयार पारेको लय नक्कल गरेर गीत गाएर चर्चित हुने रोग कहिले अन्त्य होला ?
एक पटक एक जना स्रष्टाले आफ्नो डायरी हराएछन् । डायरी साहित्यिक सिर्जनाले भरिएका थिए । मूल्यको हिसाबले त्यस डायरी सय रूपैयाँको भए पनि मेहनत र रचनाको हिसाबले त्यो अमूल्य थियो । पाण्डुलिपि भने पनि, कृति भने पनि वर्षौंदेखि आफ्ना असंख्य दुःख, पीडा र अनुभव सँगालेको डायरी हराउँदा स्रष्टालाई स्वयं हराएको अनुभूति भएको हुँदो हो । कति रात अनिँदो भए, कति दिन पीडामा डुबे । तर, डायरी भेटिएनन् । उनी निराश भए, विक्षिप्त भए र केही समयपछि विर्सन बाध्य भए । केही समयपछि ती स्रष्टा फेरि मर्माहत् भए, जब उनको सिर्जना एकाएक अर्को स्रष्टाको नामबाट छापिन थाल्यो । मधुपर्क, गरिमाजस्ता साहित्यिक पत्रिकामा सिर्जना छापिन थालेपछि नक्कली स्रष्टाले वाहवाही पाए । पीडित स्रष्टाको निर्मम ढंगले भावनाकै हत्या भयो । आफ्नै सिर्जना भए पनि पीडित स्रष्टासँग कुनै दसी प्रमाण नहुँदा अरुकै नाममा छापिए पनि चित्त बुझाउनुसिवाय अरु विकल्प हुँदैन । आफैँले पाएको सन्तानलाई अरु कसैले मैले पाएको भनेर दाबी गर्दा सम्बन्धित आमालाई कतिसम्म पीडा हुन्छ होला ? साहित्यको सवालमा किर्ते गर्नेहरुउपर त्यस्तो कारबाही भएको सुनिएको छैन ।
साहित्यकार बन्न त्यति सजिलो छैन । र, चाहँदैमा बनिने पनि होइन । स्रष्टाहरुले रचना सिर्जनादेखि कृति प्रकाशनसम्मलाई प्रसव पीडाका रुपमा त्यसै तुलना गरेका पनि होइनन् । यति धेरै दुःखका साथ सिर्जना गरेका रचनालाई चोरेर कथित साहित्यकारका रुपमा आफूलाई उभ्याउनुजस्तो पाप अरु केमा हुन सक्छ र ? सके आफैँले रचना गरौँ, नसके अर्काको किर्ते नगरौँ । चोरेको कुनै पनि कुराले आफ्नो आत्मालाई खुसी तुल्याउन सक्दैन । लोकलाई केही समयलाई भ्रम फैलाउन सकिएला । आफू भने कहिले पनि वास्तविक साहित्यकार हुन सकिँदैन । आउनोस्, साहित्यिक माफियालाई सबै मिलेर बढारौँ । साहित्यको संरक्षण गरौँ र वास्तविक स्रष्टाहरुको सम्मान गरौँ ।